eNasha.com - ऊर्जा बचत ? कपडा फुकाल्नुस्
ऊर्जा बचत ? कपडा फुकाल्नुस्
चीनको व्यापारिक राजधानी सांघाईको मुख्य व्यापारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरुलाई टाइ-सुट, सर्ट-पेन्ट नलगाई आउन कार्यालय प्रमुखहरुले आग्रह गरेका छन् । पछिल्लो समयमा ४० डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुगेपछि कार्यालय प्रमुखहरुले आफ्ना कामदारहरुलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
"सांघाई नगर सरकारले 'ऊर्जा बचत अभियान' शुरु गरेयता मानिसहरुलाई पर्यावरणप्रति जागरुक बनाउन टाइ, सर्ट, सुटजस्ता कुरालाई निरुत्साहित गर्न थालिएको छ", अजिया सेन्टरमा टाँगिएको सूचनामा लेखिएको छ ।
अहिले ३१ कार्यालय यही एकै ठाउँमा छन् । हरेक दिन त लुगा फुकाल्न मिल्दैन होला तर शुक्रबारलाई चाहिँ 'कुल ड्रेस डे' का रुपमा मनाउन प्रायः कार्यालय राजी भइसकेका छन् । त्यस दिन हलुङ्गा लुगा लगाउन पाउने कुराले कामदारहरु पनि दङ्ग परेका छन् ।
यो क्षेत्रका कार्यालयहरुलाई स्थानीय सरकारले एयर कन्डिशनर नचलाउन र ऊर्जा वचत गर्न आग्रह गरेको छ । कालो र खैरो रंगका सुटहरुका बदलामा र्सट र टी-सर्टहरु पहिरिन कामदारहरुलाई आग्रह गरिएको छ ।
चीनमा पछिल्लो आर्थिक प्रगतिका कारण यहाँ ऊर्जा संकट बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा देशका विभिन्न भागमा घण्टौँ बिजुली गुल हुने गरेको । यस्ता समस्यालाई हल गर्न सुट छोडेर सट पहिरिन सरकारले आग्रह गरेको रोयटरले बताएको छ ।